Hooyo ay labo carruur ah uga dhinteen safar ay uga soo barakaceysay abaarta Gedo - Radio Ergo
Fartuun Warsame oo ah hoyo ka soo barakacday abaar ku qabsatay Bakool waxaa dhexda uga soo dhimatay labo carruur ah oo ay dhashay/Maxamuud Cabdirashiid/Ergo
(ERGO) – Kumannaan qoysas xoolo-dhaqato ah oo ay abaartu saameysay ayaa safar lug ah ku gaaraya meelo aad uga fog deegaannadooda si ay u helaan raashin, biyo iyo caawinaad kale. Mid ka mid ah qoysaska ka soo lugeeyay gobolka Bakool ayay labo carruur ah waddada uga soo dhimatay, waxayna ku qasbanaadeen inay dhexda ku soo duugaan ka hor inta aysan soo gaarin halkii ay u soo hayaameen.
Weriyaha Raadiyow Ergo Maxamuud Cabdirashiid ayaa wareysi la yeeshay Fartuun Warsame Maxamed, oo ah hooyadii dhashay labada carruurta ah. Haweeneydaan ayaa ka soo barakacday deegaanka Goobito oo 86 km u jira magaalada Luuq, kaddib markii ay abaartu ka leysay 16 neef oo ka tirsanaa 20 ari ah oo uu qoyskeedu lahaa. Waxay iyada, seygeeda iyo afarta carruur ee u soo hartay wadada ku soo jireen shan cisho, waxayna hadda ku nool yihiin xero barakac ah oo ku taalla Luuq.
Fartun: Carruurta way iga xanunsanaayeen, waxaan ula soo cararay si aan isbitaallada magaalada u gaarsiiyo. Wiil iyo gabar ayay ahaayeen, oon iyo gaajo ayaa jirtay oo way oonnaayeen. Mid labo sano ayuu jiray midda kale saddex sano ayay jirtay. Biyo iyo cunto aan cunno maan haysan.
Raadiyow Ergo: Waxaad ahayd xoolo-dhaqato. Maxaad uga soo barakacday deegaanka Goobito?
Fartun: Waxaan ka soo cararay abaarta. Waxaan dhaqanayay ari, markii aan biyo iyo baad u wasyay ayaan soo cararay si aan nolosheenna u badbaadsanno. Ariga intiisa badan way iga dhamaadeen. Afar ayaa ii soo hartay oo waan wataa, hadda halkaan ayay joogaan.
Raadiyow Ergo: Safarkiinna aad magaalada ku soo gaarteen siduu ahaa. Maxaad jidka ku soo aragteen, bal sharraxaad yar nooga bixi?
Fartun: Waxaan jidka ku soo jirnay shan maalmood. Cuntada iyo biyaha aan wadannay wax yar oo aan nagu filnayn ayay ahayd, aad buu u dhib badnaa safarka. Dadka soo barakacay way badnaayeen oo annaga keliya maan ahayn. Waxaa alaabta lagu soo wada qaatay gaari-dameer. Carruurta waxaan soo saaray gaari dameerka, qadar Alle ayaa timid oo waqtigooda ayaa soo dhamaaday. Waxaan is lahaa way ku fiicnaanayaan haddii aad isbitaalka geyso, balse dhexda ayay iiga dhinteen. Matag, shuban iyo qandho ayaa haysay. Markii aan soo baxayay waxaan is lahaa way ku bogsanayaan haddii ay daawo helaan.
Raadiyow Ergo: Markii aad Luuq timid cuntada iyo biyaha ka waran, miyaad heshay?
Fartun: Waxba kuma heysanno halkaan. Hadda aan kula hadlayo waxaan joogaa xero barakac. Xerada biyo ayay leedahay, balse wax cunto ah ma haysanno.
Raadiyow Ergo: Carruur kale miyaa kuu joogta, marka laga soo tago labada kaa dhimatay?
Fartun: Haa, carruur kale ayaa ii joogaan oo way iska fiican yihiin, inkastoo ay gaajo la il-daran yihiin. Waxaan dabka u saaraa, kista yar ee aan walaaladeyda Muslimiinta ah ka soo helo.
Raadiyow Ergo: Maanta wax aad u kariso ma heshay?
Fartun: Wax yar oo aan walaalahay ka helay ayaan hayaa, caawa ayaan u karini doonaa.
Raadiyow Ergo: Dadkii kale ee aad isla soo hayaanteen, ka waran xaalkooda?
Fartun: Dhamaan dadka halkaan jooga waa isku wada mid. Dhamaaanteen abaartu waa u simannahay oo way na saameysay, inkastoo ay kaligey carruur iga dhinteen, dhamaanteen waan iska dhibaateysannahay. Waxaan u baahannahay in na lagu caawiyo cunto. Hadduu Ilaahey cunto na siiyo waa Alxamdulilah.